About us - Shanghai Jiahao Imishini Co. ltd.
I-SHANGHAI JIAHAO Machinery Co., Ltd., njengomhlinzeki wemishini owaziwa nge-plastic extrusion, itholakala eShanghai China futhi yakhe izisekelo ezintathu zokwakha eShanghai nase Jiangsu esifundazweni. Ngesisekelo seminyaka engaphezu kwengu-20 'nokulawulwa kwekhwalithi ephezulu, inkampani inempumelelo enkulu kumaphrojekthi wezobuchwepheshe eMnyangweni Wezokuxhumana, uhlelo loMnyango Wezokwakha kanye neTelecom lokunikeza izinhlobo zemishini yepulasitiki ye-extrusion.
Uhlu lwemikhiqizo yenkampani:
I-1.Single-screw, i-twin-screw extruder;
2.Plastic (PVC, PC, PS, PET, PE, PP), ishidi, umugqa wokukhiqiza ibhodi;
3. WPC / SPC phansi kukhiqizwa umugqa
4.Plastic (PVC, PC, PS, PET, PE, PP) Iphrofayela Production umugqa;
Iphrofayli umugqa ukukhiqizwa plastic 5.Wood;
6.Mixer, Crusher, Grinder, Isikhunta, Chiller, njll imishini asizayo for
Iphrojekthi ye-7.Turn-key yephepha lepulasitiki, iphrojekthi yokukhiqiza iphrofayili
Yonke imishini engenhla yeJiahao Company ithunyelwa emazweni angaphezu kwamashumi amabili eYurophu, eNyakatho Melika, eNingizimu Melika, eMiddle East, e-Afrika naseNingizimu-East Asia esifundeni nakwamanye amazwe, anedumela elihle ngephrojekthi ephumelelayo ohlangothini lwamakhasimende.
Inkampani yethu isebenzisa izindinganiso zikazwelonke nezimboni kuze kufike ezingeni eliphezulu, ilawula ngokuqinile inqubo ngayinye, futhi iqinisekise ikhwalithi yengxenye ngayinye. Ngemuva kokuthi imishini isihanjisiwe kumakhasimende, sizokwenza uphenyo oluphelele ngokusebenza kwemishini ukwenza ngcono ubuchwepheshe nekhwalithi yethu. Le nkampani ibhizinisi elikhulu kakhulu elinobuchwepheshe obuphelele bokucubungula eShanghai.
Inkampani yethu ineqembu elihle kakhulu lobuchwepheshe, abasebenzi abangaphezu kuka-100 abaqeqeshiwe nabasebenza. Bazokwenza konke okusemandleni abo ukuklama isethi enhle yemishini yamakhasimende ethu. Sine umnyango ezimele emva-yokuthengisa ukunikeza amakhasimende nge olunzulu emva-sales service. Onjiniyela bethu bazophinde banikeze ngezinsizakalo zaphesheya kwezilwandle.